China Fitaovana fonon-tanana fonenana sy mpamatsy | qiangjing
Ny fonon-tanana fanatanjahan-tena dia manana fiasa lehibe efatra: 1.Non-slip. Mitandrema amin'ny fitaovana rehefa manao fanazaran-tena raha toa ny hatsembohana tanana. 2. fiarovana. Tsy misy fiantsoana tanana, indrindra ho an'ny tànan'ny vehivavy. 3. Ny dikany tsara. Raiso ohatra ny martial arts, afaka manana fahatsapana tsara kokoa ianao rehefa mitafy fonon-tanana. 4. tsara mijery. Ny fonon-tanana ara-pahasalamana ankehitriny dia lasa fitaovana fampitaovana.
Fampiasa: hanamaivana ny fanaintainana miverina, fanitsiana ny fahaterahana ratsy
Betsaka ny fonon-tanana momba ny fihenam-bidy amin'ny tsena, ary ny fampiasana Fitness dia tokony hampiasa ny fonon-tanana isan-karazany. Rehefa manao fanatanjahan-tena amin'ny fitaovana mahery vaika dia mila mampiasa fonon-tànana matevina matevina ianao, toy ny fanosehana lakandrano mavesatra, raha mampiasa fonon-tanana mahazatra, dia alefa ao anatin'ny 1 volana. Raha manao fanazaran-tena mavesatra toy ny dumbbells ianao dia mila misafidy ny fonon-tanana ara-pahasalamana amin'ny hoditra eo an-tànanao, lamba eo an-damosin'ny tanana, ary fonon-tànana. Raha te-hanao pull-up, haiady masiaka ary fanatanjahan-tena hafa ianao, dia misafidy fotsiny akanjo manjelanjelatra marevaka sy be aina.
Mampiasà fitaovana mifono rivotra mba hisorohana ny hafanana feno fehin-tànana, ny lamba vita amin'ny lamba dia marefo sy lamba matevina. Ny lamba vita amin'ny gorodona dia manana elasticity, avo density. Noho izany, ny fanoherana ny rivotra dia ampiasaina betsaka amin'ny fonon-tanana mandroso sy ny fonon-tanana manokana. Ny akora tsy mipetaka mipetaka amin'ny vatan-doha dia matetika ampiasaina amin'ireo faritra mirehitra amin'ny totohondry eny an-tanana, ary vita amina fitaovana vita amin'ny fitaovana mikraoba vita amin'ny microfiber izy io.
Môtô: mitovy ny safidy aminy amin'ny fonon-tànana amin'ny bisikileta. Izy io dia manana fandanjalanja tsara, tsy manakana ny fandidiana, mety amin'ny halehiben'ny tanana, manao fonon-tànana vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra, na mifidy fonon-tànana misy fitaovana fibre karbonika amin'ny lamosin'ny tanana, mba hiarovana ny tanananao.
Skiing: Miankina amin'ny tsangantsanganana amin'ny ski ny fizotry ny filokana rehetra, noho izany dia avo be ny fepetra takiana amin'ny fonon-tanana. Tsy vitan'ny hoe mitazona ny hafanana sy ny hatsiaka, fa koa tokony ho malefaka, tsy hiakanjo sy tsy hanapahan-porofo. Ny fonon-tanana Ski amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny hoditra voajanahary sy vita amin'ny synthetic, dia tokony hifidy lamba tsy fantatra. Rehefa miserana tsy tapaka ny oram-panala rehefa milomano dia milentika moramora ao anaty rano izy ary miditra ao anaty fonon-tànana, noho izany dia tsy maintsy mitete rano ny lamba ivelany. Mandritra ny filomanosana dia tsy maintsy zatra tsy ankiato ny fitaovana fandroana ski, ka tokony ho malalaka ny fonon-tongotra amin'ny ski ary tokony hampisaraka amin'ny rantsan-tànana dimy mba hampiasa mora azy. Raha lava kokoa ny hatokan-tànana, ary azo afenina ny fehin-tànana, dia ho voavonjy ny wrist. Raha misy tombo-kase famandrihana elastika, dia afaka manakana tsara ny fidirana amin'ny ranomandry izy io. Tsara kokoa raha manana pad pad landy mba hiarovana sy hitandroana ny hafanana. Ny snowboarders dia afaka misafidy saron-tànana amin'ny rantsantanana dimy sy rantsan-tànana roa, ary ankehitriny fonon-tànana telo koa dia malaza amin'ny skiers. Raha azo atao, manamboara kiraro fanampiny, tsara ny fampisehoana rano, tsy afaka mijanona ny hatsembohan'ny tànanao ianao.
Eny ivelany: Amin'ny hetsika ivelany, ny fonon-tanana any ivelany dia hitondra anjara toerana lehibe amin'ny hetsika miampita sy ampitsihana ny boriky. Amin'ny ririnina ho avy, amin'ny andro mangatsiaka, ny hafanana sy ny fiononana amin'ny tanana dia mamaritra ny fampiononana ny vatan'olombelona. Ny ampondra tsy miteraka dia mila fonon-tànana azo tanterahina sy fonon-tànana mahavelona, ​​fikosehana palma mahery vaika, rantsantanana marefo ary fonon-tanana tena mafana.
Sorts Gloves Article akademika
The loza raha mitaingina nefa tsy manao pataloha moto?
Rehefa avy nitaingina bisikileta, efa nahatsapa ho maloiloy, hikotaka na fahalemena eny an-tananao ve ianao? Raha ny valin-teninao dia YES, mety ho nijaly noho ny fanampian'ny tananao ianao. Fantaro ny ratra fanatanjahan-tena mahazatra rehefa mitaingina bisikileta ara-potoana. Raha ny tena izy, raha mbola ny fanitsiana ny hetsika sy ny fampiasana fitaovana, dia ahafahana manampy anao tsy hanalavitra ny ratra.
Raha resaka fijerena fiarovana dia zava-dehibe ny hiresahana momba ny fonon-tongotra amin'ny bisikileta. Fitaovana saron-tava manokana ho an'ny bisikileta. Araka ny karazana bisikileta samy hafa, azo zaraina ho fonon-tànana amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, fonon-tànan'ny bisikilety ary làlan-tanana midina. Ny fonon-tanana natao ho an'ny fanatanjahan-tena mahery vaika ho an'ny marika sasantsasany dia ilaina izany amin'ny lafiny fiarovana ara-batana sy fampiononana mitaingina azy. Raha ny farim-potoana dia misy ny antsasaky ny rantsan-tànana ary ny rantsantanana feno. Ny tanany palmie dia matevina. Arakaraka ny toerany sy ny fampifanarahana dia samy hafa ihany koa ny akora ampiasaina amin'ny hazo palma. Ohatra, ny lamban-tsofina ho an'ny bisikilety amoron-dàlana dia manify kokoa noho ny fonon-tanana amin'ny bisikileta tendrombohitra.
Raha ny tananao miendrika boribory, tsy misy fonon-tanana matihanina, ny tsindry dia alefa mivantana any amin'ny median nerve amin'ny ankihibe, ny rantsan-fanondro, ny rantsan-tanany ary ny ampahany amin'ny rantsan-tànana, ka mahatonga ny fanenoman-tanana, ny fanaintainan'ny rantsantanana, ary ny fahalemena, izay ara-pitsaboana antsoina hoe syndrome tonelina wrist. Ny fanerena maharitra mandritra ny fotoana lava eo amin'ny hozatra median dia mety hiteraka fahaverezan'ny rantsantanana, ny rantsantanana ary ny rantsan-afovoany, ny hozatry ny hozatra ary ny fanaintainan'ny fanaintainana eo amin'ny tanana mamirapiratra amin'ny tonon-tsoroka sy soroka.
Ny fonon-tanana moto dia afaka miaro rehefa latsaka ao anaty fiara ianao ary miaro amin'ny masoandro sy ny hatsiaka. Aza atao ambanin-javatra ny fonon-tànana kely. Ny safidy fitaovana ho an'ity ampahany ity dia ho hafa noho ny faritra samihafa amin'ny tanana. Ohatra, ny lamosin'ny tanana matetika dia vita amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny fantsom-bolo, ny famporisihana ny hatsembohana, ny fiarovana ny masoandro ary ny fiarovana mangatsiaka Ny faritra dia manantitrantitra ny fiasan'ny shock shock, anti-skid ary mitafy lamba, ny famoronana fonon-tanana. mandinika sy mihaino.
Ny pataloha-tànana rehefa mitaingina môtô dia manampy amin'ny setroka hatsembohana, tsy mihintsan-kibo, sempotra, manafintohina, miaro ny palma sy ny tanany. Rehefa mivezivezy amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha ambony ny môtô, ny fiankinan'ny mpitaingina môtô dia miankina betsaka amin'ny tanana, ka ilaina ny anti-skid sy shock shock shock. Satria ny mpitaingina azy dia maka endrika piraika sy giazy izay tsy mitovy amin'ny fitsangatsanganana fialam-boly dia io no mitazona ny fantsom-bavony amin'ny tsy fihenjanana mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa mandeha ny fotoana, dia mety hiteraka aretim-piboronan'ny varotra. Ny fiasa manokana amin'ny fonon-tanana mitaingina, dia ny fanamaivanana ny tsindry amin'ny fantsom-tànana. Ny fihetseham-pon'ny fanafody manafosafo ny felatan'ny sarin-tànana dia ahafahana manamaivana ny hery fanehoan-kevitry ny manidintsidina mandritra ny dingana filomanosana, ary misoroka ny fanimbana ny sakana amin'ny felana, ka izany dia mampihena ny harerahana amin'ny tanana ary mampitombo ny fiarovana ny bisikileta
Previous: Ny fanohanana ny elatra
Manaraka: Volon-dohalika akanjom-borona
Mpitandro mihetsika mihetsika eo ambany hazo
Tanana ny soroka sy ny feny